ဘဝမှာ အရမ်းလုပ်ချင်ပြီး မလုပ်ခဲ့ဖူးသေးတဲ့ သူမရဲ့ပထမဦးဆုံး Music Video ကို ပရိသတ်တွေအတွက် တိတ်တိတ်လေးစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး - Myannewsmedia
ဘဝမှာ အရမ်းလုပ်ချင်ပြီး မလုပ်ခဲ့ဖူးသေးတဲ့ သူမရဲ့ပထမဦးဆုံး Music Video ကို ပရိသတ်တွေအတွက် တိတ်တိတ်လေးစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး
အသက်အငယ်ဆုံး အကယ်ဒမီသုံးဆုရှင်ဖွေးဖွေးကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးက သူမရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းအစမှာ Art Of Depression အဖွဲ့ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် သီချင်းတွေကို သီဆိုခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖွေးဖွေးက ဂီတထက် သရုပ်ဆောင်ဘက်ကို ပိုမိုအားစိုက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဖွေးဖွေးက ပရိသတ်တွေအတွက် လက်ဆောင်လေးတစ်ခု စီစဉ်ထားကြောင်း ပြောပြလာပါတယ်။ “Here I Am August…2020 ♌🖤🤍 August မှာ ယူတို့ အတွက် တိတ်တိတ်​လေး စီစဉ်ထားတာ​လေး… 🤫🤍✨xX ​ဖွေးဘဝ ရဲ့ အရမ်း လုပ်ချင်ပြီး မလုပ်ခဲ့ရ​ဖူးသေးတဲ့အရာ။ My very very 1st Music Video Of My Song!! Coming very very soon ဆို​တော့ …​ဖွေး..အများကြီး​တွေမ​ပြော​​တော့ဘူးကွာ..🌹​မျှော်……..🖤🤘” ဆိုပြီး သူမကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးရဲ့ Music Video လေးကို ချပြမယ့်အကြောင်း ပြောလာပါတယ်။
ဖွေးဖွေးကတော့ သူမရဲ့ ပထမဦးဆုံး Music Video လေးကို အခုသြဂုတ်လအတွင်းမှာ ချပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ ဖွေးစိန်ရဲ့ Music Video ကို ကြည့်ရှုရမှာမို့ ဖွေးဖွေးနဲ့ ထပ်တူ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေမယ် ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အသကျအငယျဆုံး အကယျဒမီသုံးဆုရှငျဖှေးဖှေးကတော့ ဆယျကြျောသကျအရှယျကတညျးက အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျလာခဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ဖှေးဖှေးက သူမရဲ့ အနုပညာသကျတမျးအစမှာ Art Of Depression အဖှဲ့ရဲ့ ပငျတိုငျအဆိုတျောတဈယောကျအဖွဈ သီခငျြးတှကေို သီဆိုခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ ဖှေးဖှေးက ဂီတထကျ သရုပျဆောငျဘကျကို ပိုမိုအားစိုကျလုပျကိုငျခဲ့ပွီး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှေ ဆကျတိုကျရိုကျကူးလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ဒီတဈခါမှာတော့ ဖှေးဖှေးက ပရိသတျတှအေတှကျ လကျဆောငျလေးတဈခု စီစဉျထားကွောငျး ပွောပွလာပါတယျ။ “Here I Am August…2020 ♌🖤🤍 August မှာ ယူတို့ အတှကျ တိတျတိတျလေး စီစဉျထားတာလေး… 🤫🤍✨xX ဖှေးဘဝ ရဲ့ အရမျး လုပျခငျြပွီး မလုပျခဲ့ရဖူးသေးတဲ့အရာ။ My very very 1st Music Video Of My Song!! Coming very very soon ဆိုတော့ …ဖှေး..အမြားကွီးတှမေပွောတော့ဘူးကှာ..🌹မြှျော……..🖤🤘” ဆိုပွီး သူမကိုယျတိုငျသီဆိုထားတဲ့ သီခငျြးလေးရဲ့ Music Video လေးကို ခပြွမယျ့အကွောငျး ပွောလာပါတယျ။
ဖှေးဖှေးကတော့ သူမရဲ့ ပထမဦးဆုံး Music Video လေးကို အခုသွဂုတျလအတှငျးမှာ ခပြွမှာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျကတော့ ဖှေးစိနျရဲ့ Music Video ကို ကွညျ့ရှုရမှာမို့ ဖှေးဖှေးနဲ့ ထပျတူ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားနမေယျ ထငျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Previous post ” မွေးလအစမှာ သိန်း(၅၀၀)ထီဆုကြီးကို ကံထူးခဲ့တဲ့ အွန်လိုင်း ဟာသသရုပ်ဆောင်အလင်းသခင်”
Next post မပြောပလောက်တဲ့ သေးသေးမွှားမွှားကိစ္စလေးတွေကအစ ပရိသတ်တွေနဲ့ စီနီယာအနုပညာရှင်တွေအပေါ် အလေးထားတဲ့ ပိုင်တံခွန်